N’afọ iri abụọ na ise sochirinụ, amụma m
Tọzdee, Nọvemba 16, 2006 Friday, December 12, 2014 Douglas Karr
Ọ bụ ihe ọ toụ iche n’echiche banyere ọdịnihu na ihe ọ ga-eweta. Nke a bụ nchịkọta nke amụma m… Kọmputa nyochaa ga-agbanwe, ọkụ, sara mbara ma dị ọnụ ala. Nke kachasị nke plastik, usoro nrụpụta ga-adị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala. Mgbanwe nke ekwentị, telivishọn na kọmputa ga-ezu oke. Gbọ ala na ụgbọ elu ka ga-eji gas arụ ọrụ. Ike United States ka ga-enye site na icheku ọkụ. Kọmputa ngwanrọ ga-apụ kpamkpam,